The Myanmar Environmental Forum • View topic - လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခ နှစ်ဆ တိုးမြှင့်ခြင်း နှစ်ရက်သာ ကြိုတင်အ
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခ နှစ်ဆ တိုးမြှင့်ခြင်း နှစ်ရက်သာ ကြိုတင်အ
Posted: Wed Oct 30, 2013 6:03 pm
+3 # Ever_Smile 2013-10-30 15:57
မီတာခမကိုက်လို့ဈေးတက်တာကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတော့လက်ခံပါတယ်။...ဒါပေမယ့်အခုလိုရုတ်တရက်တော့မကောင်းဘူးပေါ့..ရှုံးနေတယ်ဆိုရင်လည်းminhtetpaizinပြောသလိုမတရားသဖြင့်အဆမတန်ကောက်နေတယ့်phone billနဲ့internet billတွေကျတော့ပိုးစိုးပက်စက်မြတ်နေပါသဖြင့်ဆိုပြီးဈေးချပေးပါလား...Quote:
အမြတ်အစွန်းတွေရနေတဲ့ ပြည်သူတွေမတန်တဆဈေး ပေးနေရတဲ့ တယ်လီဖုန်းနဲ့ အင်တာနက်လို ဟာမျိုးတွေကျတော့ရော ဘာလို့ ဒီလောက်အထိ ဆိုးဝါးနေရပါသလဲ ။ မတန်တဆငွေယူထားပြီး အလုပ်ကလဲ ဖလန်းဖလန်း ဖြစ်မနေသင့်ဘူးလား ။
ဒါနဲ့စကားမစပ်..တခြားလူတွေရဲ့ခံစားချက်တွေတော့နားလည်ပေးလို့ရပေမယ့်အာရှတော်ဝင် ဆေးရုံမှ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာမြတ်သူပြောတယ့်စကားတော့သိပ်ဘဝင်မကျချင်ဘူး...
+15 # kyaw zaw linn 2013-10-30 14:31
မှားပြီးရင်း မှားနေ.. နီးစပ်ရာ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ အာဏာပိုင်များ ပိုမိုချမ်းသာသွား.. ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း အသေးစားလုပ်ငန်းရှင်တွေ ပြည်သူတွေ ပိုမိုဒုက္ခရောက်... တော်တော်စိတ်ပျက်ဘို့ကောင်းလွန်းပါတယ်ဗျာ..
+22 # minhtetpaizin 2013-10-30 14:03
တစ်ခုခုဖြစ်ရင် ပြည့်လူထုကိုဘဲဒုက္ခပေးဖို့စဉ်းစားနေတယ် အမြတ်ခွန်မှာလည်း မနှစ်ကစံနှုံးကိုမမှီရင်ဒီနှစ်အတွက်တိုးကောက်တယ် ဘယ်သူတွေဆောင်ရလဲ ပြည်သူတွေဘဲအခွန်ဆောင်ရတယ် (အထက်လူကြီးနှင့်အပေါင်အပါများမပါ)အခုလာပြန်ပြီEPCကရှုံးလို့တဲ့ ပြည်သူလူထုကဘဲ မီတာအခွန်ကိုပိုဆောင်ပေးရတော့မယ် ဘာကြောင့်အရှုံးပေါ်သလဲဆိုတဲ့ပြဿနာအရင်းအမြစ်အဖြေကိုမရှာဘူး သူတို့အမေလင်တွေများပိုက်ဆံပေါတယ်များထင်နေလားမသိဘူး ရှုံးမှာပေါ့ မီတာမရှိ ဆားဗစ်ကြိုးလခနဲ့ချိပ်ပေးနေတာEPC ကလူတွေဘဲ မီတာခသက်သာအောင် မီတာကိုပြင်ပေးနေတာလည်းEPC ကလူတွေဘဲ ကွင်းဆင်းလေ့လာပါငတုံးတွေရဲ့ ခင်ဗျားတို့ရှုံးတိုင်းပေးရအောင် ကျုပ်တို့ကခင်ဗျားတို့အမေ့လင်တွေမဟုပ်ဘူး
+44 # htuthtut 2013-10-30 10:03
အကောင်းဆုံးကတော့ မလုပ်တတ် မကိုင်တတ်ဘဲ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားပဲ ရှာစားတတ်တဲ့ လက်ရှိအစိုးရက လူတွေ အကုန်ထွက်တာအကောင်းဆုံး။
+46 # Rain 2013-10-30 08:52
ဈေးကွက်သဘောအရ မကိုက်ရင်တော့ ဈေးတက်နိုင်ပါတယ်...
ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ကာစတန်မာတွေရဲ့ အခြေအနေတွေကိုလည်းနည်း
နည်းလောက် လေ့လာကြည့်သင့်ပါတယ်...သူတို့ ရဲ့ အလုပ်အ
ကိုယ့်ခြံထဲကကြက်ပဲ ကိုယ်ကြိ်ုက်တဲ့အချိန်ချက်စားနိုင်တယ်လို့ 
ဒါမှမဟုတ် ရှေးရိုးနည်းအတိုင်း ပြည်သူတွေကို နိုင်ငံရေးဖက်မ
လှည့်နိုင်အောင်လို့ (ဥပဒေပြင်မဲ့ ကိစ္စတွေကိုစိတ်မဝင်စားအောင်) နေ့ စဉ်စားဝတ်နေရေးတွေနဲ့ ပဲ
မဟုတ်နိုင်ပါဘူးလို့ တွေးကြည့်ပေးချင်ပေမဲ့ အခြေအနေတွေက
+33 # thargi 2013-10-30 08:16
Government should control infrastructures, like roads, bridges, electricity, water, etc.
if not, public will be taken hostage by greedy companies.
rate in US, Singapore is around 150 - 240 kyats per kwh, but their per family income is 50 times bigger than us.
stupid gov will sell everything before 2015!!! those ministers will sell their own mothers, if profitable.
+5 # Aung Naing 2013-10-30 12:59
Why they don't sell their wife to Pakistani? Ha Ha Ha!
+53 # JungleBoy 2013-10-30 07:12
အားလုံးဂွင်ဖန်ပြီး ကိုယ်ကျိုးရှာနေကြတာပါဗျာ။ လုပ်ပိုင်ခွင့်တစ်ခုရဖို့ အဆင့်ဆင့်ပေးမှ၊ ပေါင်းစားမှရတာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိနဲ့ ဥပဒေဘောင်တွင်းက ရင်းနှီးမြှပ်နှံလိုတဲ့ အရင်းအနှီးကြီးတဲ့ ဘယ်ကုမ္ပဏီမှ ဝင်မလာဘူး။ တိုင်းပြည်အတွက်ဘယ်လောက်ပဲ အကျိုးရှိရှိ သူတို့အတွက်မလာလို့ကတော့ ဆောရီးပဲ။ ကိုယ်တိုင်လည်းကြုံဖူးပါတယ်။ ခေါင်ကမိုးမလုံ ထရံတွေလည်းဆွေး ကြမ်းလည်းပေါက်နေတဲ့ အနေအထား။ တောခွေးအုပ် အမဲကောင်ကို ဝိုင်းလုနေကြသလို။
+62 # minhtetpaizin 2013-10-30 07:04
အစိုးရရဲ့စေတနာပါပဲဗျာ ။ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ဓာတ်အားဝယ်ယူမှု ကုန်ကျစရိတ်များ တတ်နိုင်သမျှ ကာမိစေရန်အတွက် အရှုံးကိုကာမိစေရန်အတွက် ဈေးတက်ရတာပါဆိုရင် ....